Mpanamboatra sy mpamatsy herinaratra elektronika - Orinasa elektronika any Peripheraly China
Profesora feno 12-inch ...
12-mirefy roa halavany feno feno ...
15-mirefy roa halavany feno feno ...
DAP ANDIAN-DAHATSORATRA efatra amin'ny valo amin'ireo fantsom-peo nomerika mpanodina nomerika
DAP Series Processeur
Ø Mpandrindra feo miaraka amina fanodinana santionany 96KHz, fikirakirana DSP avo lenta 32 bit, ary mpanova 24 / bit A / D ary D / A avo lenta, manome antoka ny kalitaon'ny feo avo.
Ø Misy maodely marobe amin'ny 2 in 4 out, 2 in 6 out, 4 in 8 out, ary ny karazana rafitra audio dia azo ampifangaroina mora foana.
Ø Ny fidirana tsirairay avy dia miaraka amina fampitoviana sary 31-bandy GEQ + 10-band PEQ, ary ny vokatra dia miaraka amina PEQ 10-band.
Ø Ny fantsom-panafahana tsirairay dia misy asan'ny fahazoana tombony, dingana, fanemorana ary fahanginana, ary ny fantsom-pamokarana tsirairay dia misy asan'ny tombony, fizarana, fizarana matetika, fetran'ny tsindry, moana ary fahatarana.
Ø Ny fanemorana ny fivoahan'ny fantsona tsirairay dia azo ahitsy, hatramin'ny 1000MS, ary ny dingana fanitsiana farafaharatsiny dia 0.021MS.
Ø Ny fantsom-panafahana sy ny fivoahana dia afaka mahatsapa ny fitaterana feno, ary afaka mampifandray ireo fantsona famoahana marobe mba hanitsiana ireo masontsivana rehetra sy ny fikajiana ny fakan-tsarimihetsika fantsona
DSP-8600 X5 karaoke KTV processeur nomerika
Ity andiam-vokatra ity dia processeur karaoke miaraka amina fikirakirana fikirakirana mpandahateny, ny ampahany tsirairay amin'ilay fiasa dia azo ovaina tsy miankina.
Ampiasao ny bus 24BIT mandroso sy ny maritrano 32BIT DSP.
Ny fantsona fampidirana mozika dia miaraka amina bandy 7 fampitoviana parametrika.
Ny fantsona fampidirana mikrô dia omena fizarana 15 amin'ny fampitoviana parametrica.
X-108 8 fantsom-pamokarana herinaratra manan-tsaina sequencer fitantanana herinaratra
Endri-javatra: fitaovana manokana amin'ny efijery fampisehoana TFT LCD 2 santimetatra, mora fantatra ny famantarana ny fantson'ny fantsona ankehitriny, ny herinaratra, ny daty ary ny fotoana amin'ny tena izy. Izy io dia afaka manome famoahana fantsom-pifandraisana 10 amin'ny fotoana iray ihany, ary ny fotoana fanokafana sy ny fotoana fanidiana ny fantsona tsirairay dia azo apetraka arakaraka (eo amin'ny 0-999 segondra, faharoa ny unit). Ny fantsona tsirairay dia manana toerana tsy miankina Bypass, izay mety ho Bypass REHETRA na Bypass misaraka. Fanamboarana manokana: fiasa famerenana famerenana. Kitapo famantaranandro voaorina, ianao ...
MC-9500 Mikraoba an-tsarimihetsika karaoke KTV Wireless an-trano dia mametraka micro mikraoba tsy misy tariby
Fomban'ny fampisehoana: ny teknolojia fampiasa an-tànana mandeha ho azy voalohany an'ny indostria, ny mikrô dia alefa ho azy ao anatin'ny 3 segaondra aorian'ny nialàny ny fijanonan'ny tanana (misy tari-dalana, misy zoro azo apetraka), mitsitsy angovo aorian'ny 5 minitra ary miditra amin'ny fanjakana miantona, ary mihidy ho azy aorian'ny 15 minitra ary manapaka tanteraka ny herinaratra. Hevitra vaovao mikrô tsy misy tariby sy mandeha ho azy Ny firafitry ny fizaran-tany vaovao rehetra, tsara hig ...
Toro-kevitry ny rafitra Halavan'ny onjam-peo: 645.05-695.05MHz (fantsom-pifandraisana: 645-665, fantsona B: 665-695) Fantsom-pifandraisana azo ampiasaina: 30MHz isaky ny fantsona (60MHz amin'ny fitambarany) Fomba fanodinkodinana: fanodinana fatran'ny fakan-tarehimarika FM: laharana mandeha ho azy izay mifanaraka amin'ny 200 fantsom-panafana Fanapahana ny mari-pana: mihena 18 degre Celsius ka hatramin'ny 50 degre Celsius Squelch: detection feo mandeha ho azy sy kaody code digital numéro Offset: 45KHz Range:> 110dB Audio valiny: 60Hz-18KHz Famantarana feno amin'ny tabataba ...
LIVE-200 Mikrofona tsy misy tariby matihanina mivezivezy nametraka rafitra mikraoba lapel tsy misy tariby
RESEIVER Isan-karazany: 740—800MHz Fantsom-pifandraisana azo ovaina: 100 × 2 = 200 Fomba fihodinana: PLL Fiorenan'ny hafanan'ny syntetika matetika: ± 10ppm; Fandraisana fomba: superheterodyne double conversion; Karazan-karazany: fanamafisam-peo roa Fandraisana an-tsitrapo fandraisana an-tanana ny fandraisana ny fahatsapana mpandray: -95dBm Audio Frequency Valiny: 40-18KHz Distortion: ≤0.5% Signal to Rise Noise: ≥110dB Output audio: Output voalanjalanja sy famatsiana herinaratra tsy voalanjalanja: 110-240V-12V 50- 60Hz （Manova fahefana A ...
CT-9800 + 7.1 8-fantsom-pahitalavitra telo ao anatin'ny iray amin'ny avo tsy fivadihana decoder an-trano miaraka amin'ny processeur karaoke
• Ny vahaolana tonga lafatra amin'ny rafitra Karaoke & Cinema.
• Ny DOLBY, DTS, 7. 1 decoder rehetra dia tohanana.
• LCD miloko 65.5K 4-inch pixel, takelaka mikasika, tsy voatery amin'ny fiteny sinoa sy anglisy.
• HDMI 3-in-1-out, mpampifandray tsy voatery, coaxial ary optique.
CT-9500 5.1 6- fantsona decoder an-trano tsy fivadihana avo miaraka amin'ny mpanodina karaoke
• Ny fampifangaroana lafatra ny KTV matihanina mialoha ny vokatra sy ny sinema 5.1 fandefasana feo decoding.
• Ny maody KTV sy ny mode sinema, ny fari-pahalalana fampiasa tsirairay dia azo ovaina tsy miankina.
• Ampiasao ny DSP fanaovana kajy avo lenta 32-bit, AD-DA avo lenta avo lenta, ary ampiasao santionany nomerika 24-bit / 48K.